Ọ bụ ọrụ ya, Xiaomi rutere Spen na ngwaahịa na ọnụahịa na-atọ ezigbo ụtọ | Akụkọ akụrụngwa
Mgbe ọtụtụ asịrị na karịsịa kwuru nile di iche iche metụtara karịsịa ka ọnụnọ nke a ika dị ka Xiaomi na Spain na ngwaahịa ọ nwere ike ree ma ọ bụ ọnụahịa ha, n'ikpeazụ, na ihe omume emere na Madrid, ụlọ ọrụ China ka kwupụtara ọ bụghị naanị ya mbata ndị obodo anyị, ma ọ ga-erukwa na mmeghe nke ụlọ ahịa gọọmentị abụọ mbụ ya.
Echiche nke Xiaomi nwere ike ịgbasawanye nke nta nke nta na Western Europe niile maka nke ahụ, ha arụ ọrụ ọnwa ole na ole na mmepe nke atụmatụ ga-agagharị na isi ihe atọ dị ka onyinye ọrụ ịntanetị, gawa imeghe ụlọ ahịa ọhụrụ na ngabiga nke oge na enye akụrụngwa akụrụngwa na ọnụahịa dị ọnụ ala karịa ọtụtụ nke ndị na-agba ya ugbu a.
1 Na Xioami, ha nwere oke ịnụ ọkụ n'obi banyere mbata ya na Spain na mgbasawanye na Europe
2 Ndị ọrụ Spanish Xiaomi ga-enwe ezigbo nkwa na ọrụ aka ọrụ na Spanish
Na Xioami, ha nwere oke ịnụ ọkụ n'obi banyere mbata ya na Spain na mgbasawanye na Europe
Na okwu nke Maazị Wang, Xioami Senior Vice President:
Taa bụ ụbọchị taa dịịrị anyị, dịka ọ na-egosi mmalite nke isi ọhụụ na atụmatụ mgbasawanye ụwa anyị.
Obi dị anyị ezigbo ụtọ iwere nzọụkwụ mbụ a wee banye Western Europe, malite na Spain. Mgbe ọtụtụ afọ gasịrị site na nkwado nke ndị Mi Fans na ahịa Spanish, anyị nwere obi ụtọ inwe ike ịmalite ngwaahịa anyị ebe a maka ha niile na ọha na eze.
N'aka nke ọzọ, ma na-esochi okwu nke Maazị Wang kwuru, site na ụlọ ọrụ ndị China ha nwere ntụkwasị obi siri ike na ngwaahịa ha, dịka ga-adị na Spain site na echi na weebụsaịtị Mi.com/es ma ọ bụ na ibe ndị ọzọ ejikọtara ọnụ dị ka Aliexpress ma ọ bụ nnukwu ụlọ ahịa, ha nwere ike bụrụ nhọrọ mara mma maka ndị ahịa niile, ọkachasị maka ngwakọta teknụzụ, ihe ọhụrụ na ọnụ ahịa.
Ndị ọrụ Spanish Xiaomi ga-enwe ezigbo nkwa na ọrụ aka ọrụ na Spanish
Kedu ihe anyị ga - atụ anya mgbe Xiaomi bịarutere Spain? Companylọ ọrụ ahụ nwere echiche nke ibuputu nke nta nke nta, nke a pụtara na na mbido akwụkwọ ndekọ ngwaahịa ya ga-ejedebe oke. Ka i wee nwee ike ịmata ihe ị ga-atụ anya ya, gwa gị na n'oge ahụ ọ bụ naanị ekwentị abụọ ga - adị maka ire ere na mba anyị yana ọtụtụ ngwaọrụ nke 'Ihe omumu m'.
Banyere nso nke ekwentị ị nwere ike ịzụta na Spain site na echi, ekwesịrị ịdeba ama na ọ na-etinye aka na abụọ n'ime ọdụdụ kachasị nke ọma na mba anyị, dịka Xiaomi Mi Mix 2, ọnụ ọgụgụ dị elu nke nwere nkà na ụzụ dị ka Snapdragon 835 processor, 6 GB nke RAM, 64 GB nke nchekwa na, ikekwe ihe kachasị dị ịrịba ama banyere ekwentị, nnukwu ihuenyo 5,99-anụ ọhịa. Ama a ga - adị maka 499 euro, ọnụahịa nke na-etinye ya nke ọma n'ihe banyere njedebe dị elu ugbu a na naanị na-anọchite anya mmụba nke ihe dị ka euro 40 ma e jiri ya tụnyere ọnụahịa anyị nwere ike ịchọta na ibe China dị iche iche.
Dị ka nhọrọ nke abụọ anyị na-ahụ Xiami Mi A1, ekwentị mkpanaaka nke kwụpụtara iji kwadebe Snapdragon 625, 4GB nke RAM, 64GB nke nchekwa dị n'ime, igwefoto abụọ na sistemụ arụmọrụ nke Google na-emelite ozugbo site na iji gam akporo One. Ọnụahịa nke ọnụ ahịa a na-adọrọ mmasị na mba anyị. ga-abụ 229 euro, ihe dị ka euro 30 ma ọ bụ 40 dị ọnụ karịa na ibe ụfọdụ.
Banyere isiokwu dị iche iche dị na katalọgụ 'Ihe omumu m'anyị na-ahụ dị iche iche nhọrọ dị ka Igbe m, a multimedia player na gam akporo TV nke ga-adị maka euro 74'99, ndị na-atọkarị ụtọ ma na-ewu ewu My 2 Band m, a mgbaaka quantifying na 20 ụbọchị nke nnwere onwe nke ga-enwe ọnụahịa nke euro 24'99, igwefoto ihe omume, Igwefoto My Action 4K, maka euro 134'99 ma ọ bụ My Electric skuuta, Igwe eletrik na 30 kilomita nke nnwere onwe na nkwụghachi azụ nke ga-adị maka euro 349'99.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Noticias » Ọ bụ onye ọrụ gọọmentị, Xiaomi ji ngwaahịa na ọnụahịa na-adọrọ mmasị abịarute Spain
YI N'èzí Igwefoto, nchekwa ụlọ na ọnụ ala